Fanomezana: fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka Maleziana
Fotoana fandefasana: 09-02-2021
Nandritra ny volana aogositra 2021 dia nandefa vaovao tsara indray ny mpiara-miombon'antoka malgache an'ny Angelbiss ho an'ny hatsaram-panahinay hiady amin'i Covid 19. Tonga soa aman-tsara any amin'ny hopitaly samihafa any Malezia sy ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamana ny mpanentana oksizenina 5L ANGEL-5A ampiasaina amin'ny fanomezana. Ny ho ...Hamaky bebe kokoa »
Fanomezana: AngelBiss dia manampy ny COVID-19 any Indonezia
Fotoana fandefasana: 08-27-2021
Hatramin'ny nipoahan'ny COVID-19 manerantany, ny olona eran'izao tontolo izao dia nijoro teo amin'ny sehatra iraisan'ny ady amin'ny COVID-19. Angelbiss dia mandray anjara tsy tapaka amin'ny ady amin'ny COVID-19. Aorian'ny fipoahan'ny COVID-19 amin'ny ankapobeny any Indonezia, tohizo ...Hamaky bebe kokoa »
Miarahaba anao: Fampiofanana teknika ho an'i Vietnam Partner
Fotoana famoahana: 06-07-2021
Tamin'ny 1 Jona 2021, ny sampana teknikan'i Angelbiss dia nanao fiofanana an-tserasera tamin'ny alàlan'ny fizarana vietnamiana. Ny votoatin'ny fiofanana dia misy: fampidirana ireo fiasa fototra an'ny Angelbiss Oxygen Concentrator (Angel-5s), ny fomba fampiasana, ny fitazonana sy ny fanompoana ny Angelbiss Oxygen Concentrator. ...Hamaky bebe kokoa »
Fampiroboroboana ny taona vaovao 2021 !!!
Fotoana fandefasana: 12-18-2020
Mba hankalazana ny fahatongavan'ny taona vaovao, AngelBiss dia nanangana fanentanana vaovao hanomezana valisoa ireo mpanjifa vaovao sy taloha. Manomboka amin'ny 2020.12.01 ka hatramin'ny 2020.01.31, raha manafatra concentrator ôksizena 5LPM mihoatra ny 12 ianao, dia afaka mahazo milina feno fonosana COLOR BOX na metatra oksizenina vaovao ($ 150). Raha liana ianao ...Hamaky bebe kokoa »
Fanitarana ozinina tranokala vaovao 1. Fanitarana ny tranokala vaovao hatramin'ny nananganana, AngelBiss dia nanolo-tena hanatsara ny fahasalaman'ny besinimaro ary hamorona tombony ho an'ny fiarahamonina. Taorian'ny 3 taona fampandrosoana tsy tapaka, amin'ny taona 2020, An ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fifandraisana misy eo amin'ny Mobile Sucti ...
Ny tsy fahombiazan'ny tsiran'ny vatan'ny be antitra sy ny tontolon'ny rivotra masiaka tato ho ato dia nanjary ampahany betsaka amin'ny marary COPD amin'ny antenantenany sy antitra. Rehefa marary antitra ...
Ahoana ny fampiasana tsara ny Aspirator
Amin'ny ankapobeny, fantatsika bebe kokoa ny momba ny fitaovana fitrohana rongony mipetaka amin'ny rindrina ao amin'ny hopitaly. Na izany aza, raha ny fahitana ny fahafaha-manaony, ny Aspirator dia mibodo tsikelikely ny tsena mahazatra. Toy ny isan'ny olona ...
Arahabaina: Angelbiss's CMEF 2021
Tamin'ny 2021.5.13-5.16, AngelBiss ho mpiranty ary nandray anjara tamin'ny 2021 Spring China International Medical Equipment Fair (CMEF 2021). Misy dikany ny hahafantaran'ny mpiasan'ny varotra rehetra an'i Angelbiss sy hianarany bebe kokoa momba ...
Fitsaboana oksizenina — Cannasal-be mikoriana ...
Tao anatin'izay taona faramparany, ny fitsaboana oksizenina kanelina be orina be dia be dia be nampiasaina tamin'ny fitsaboana klinika, ary nahazo dera iraisan'ny marary. Voalohany, mila fantarintsika hoe inona ny oksizenina kanôlà be hidina ambony t ...
Mpifantoka oksizenina —- Inona avy ireo ...
Amin'izao fotoana izao dia fitaovana fitsaboana mahazatra ny mpanentana oksizenina sy ny entona. Betsaka ny olona tsy mahatakatra ny maha samy hafa ny ventilator sy ny concentrator oxygen. Heverin'izy ireo ho toy ny oxygène ny ventilator ...
Oxygen Generator-Fampiharana (PSA) Oxy ...
Raha ny karazan-trondro sy ny habetsaky ny hazandrano dia mihena hatrany, ary tsy ampy ny faritra mando misy isan-kapita, dia mitombo haingana ny vidin'ny fiompiana. Ny hakitroky ny fiompiana dia tokony hamaly ny tinady ...
Oxygène-Inona avy ireo vokatry ny Hypoxia
Ny oksizenina amin'ny fiainana dia mitovy amin'ny rano mitondra fiainana, ary tena ilaina izany. Mitranga ny andiam-pihetseham-panidinana oksidena rehefa mifoka ny oxygen ary ny dioksidan'ny karbaona no entina hanohanana ireo famantarana lehibe. Voalohany indrindra, mila soritsoritra ...